Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ebe kacha mma maka ndị hụrụ ihe owuwu Omuma n'anya
Ma ị bụ ọkachamara na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke dị mkpa nke ụfọdụ mmụọ nsọ ma ọ bụ na ị nwere nnukwu ịhụnanya na agụụ maka nka nke banye n'ime okike nke ụlọ kpochapụwo, mgbe ahụ enwere ọtụtụ ebe gburugburu ụwa nke ị nwere naanị. inweta na inyocha. Mgbe ị na-eme ya, ị ga-ejide n'aka na ị ga-eleba anya n'ihe ị na-agaghị echefu ngwa ngwa.
Ịchọta ụfọdụ aha kacha elu n'ụwa maka ndị hụrụ ihe owuwu oge ochie n'anya, gbaa mbọ gụọ ya.
Ebe UNESCO World Heritage Site Úbeda, nke dị na mpaghara Jaén nke Spain, bara uru ileta ndị hụrụ ụlọ n'anya nke emebere n'ụdị Renaissance oge ochie. Ụdị a, bụbu ihe a na-emekarị na Spen, ugbu a bụ ihe efu, ma ọ na-ejupụta n'okporo ámá site n'otu akụkụ nke obodo ahụ ruo na nke ọzọ, nke pụtara na ị gaghị adị anya na ya.
Na-eme dị ka ọnụ ụzọ ámá nke Andalusia, ọnụ ụzọ ámá nke jupụtara n'oké osimiri nke osisi oliv pụrụ iche, ọ dịghị ihe ọzọ, nke a bụ ebe kachasị mma ị ga-eleta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ n'ezie ma nweta ahụmahụ na-enweghị atụ, akụkọ ihe mere eme nke Spain. Obodo ejima ya, Baeza, nke dị naanị kilomita iri, adịghịkwa njọ!
Ma eleghị anya, ọ dịghị ebe ka mma ndị hụrụ kpochapụwo architecture isi n'ụwa a karịa St. Petersburg. N'ebe a, ị ga-ahụ onwe gị nke ukwuu na mmegharị Rococo, ụdị nke bịara bụrụ nke a ma ama na narị afọ nke 18 na France mana n'oge na-adịghị anya ọ ga-eru Russia. Ihe ị ga-ahụ mgbe ị na-eri nri anya gị n'elu ụlọ nke St. Petersburg na-style na Rococo ejiji bụ oké akụkụ n'akụkụ icha mmirimmiri na agba. Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na-ese ụkpụrụ ụlọ, mgbe ahụ ị ga-ejide n'aka na ị ga-ahapụ obodo a site n'ike mmụọ nsọ dị nsọ gbasara ọrụ nhazi gị ọzọ.
Na Nairobi, Kenya enwere ike ịhụ otu n'ime ụlọ 'mba bekee' kacha mma n'ụwa. Nke ọmarịcha ụlọ Giraffe Manor ghere oghe ka onye ọ bụla bịa hụ ya. N'ezie, oghe oghe ka onye ọ bụla bịa nọrọ na ya! Mgbe ịnọ ebe a, ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ ihe owuwu nke na-akọ otu puku akụkọ ka ọ na-alaghachi azụ na 1930s oge ọchịchị, mana ị ga-ahụkwa ọtụtụ ụdị anụ ọhịa dị iche iche na-aga n'ofe ahịhịa ndị mara mma nke ụlọ ahụ. Dị ka ị na-echebuburu, ị ga-ahụ òkè gị dị mma nke giraffes, mana yana giraffes, ị ga-ahụkwa ọtụtụ ndị dị ntakịrị, dị ka warthogs na peacocks.
Site na Spain ruo Russia ruo Kenya, enwere ike ịchọta mpaghara na ụlọ ndị, mgbe a hụrụ ya, ga-anọdụ ala n'uche nke ezi ndị hụrụ ụkpụrụ ụlọ n'anya ruo ọtụtụ afọ. N'ụwa niile, na kọntinent niile, enwere ike ịhụ ihe owuwu nke guzosiri ike n'ule nke oge ma bụrụzi nka. Yabụ, kedu ihe na-egbochi gị ịpụ ebe ahụ wee hụ ya niile?